Vol. 12 DISEMBA, 1910. 3
NGOKUTHETHA kwengqondo yomntu apho kuvela khona ngokwendalo kwaye ngaphandle komzamo ucinga ngendawo yexesha elizayo okanye imeko yolonwabo. Ingcinga ibonakaliswe ngeendlela ezahlukeneyo. NgesiNgesi iguqulelwe ngohlobo lwegama ezulwini.
Izinto zokufunda ezifumaneka kwiindawo ezixineneyo nasemangcwabeni zabemi base Melika abangaphambi kwexesha bungqina ngengcinga yabo yezulu. Amatye ezikhumbuzo, iitempile kunye nemibhalo ebhaliweyo yesinyithi kunye namatye kumabhodlo kwimpucuko yakudala yaseMelika ingqina inkolelo ezulwini, ngabakhi bezo mpucuko. Iinkosi zelizwe lomNayile zakhulisa ii-obeliski, iipiramidi kunye namangcwaba, kwaye zabashiya bethe cwaka, amangqina aqingqiweyo evakalisa imeko yexesha elizayo lokonwaba emntwini. Uhlanga lwaseAsia lubonelela ngobutyebi bobungqina emiqolombeni nasezitempileni, kunye noncwadi oluninzi olunenkcazo yesimo sokuvuya komntu njengeziphumo zezenzo zakhe ezilungileyo emhlabeni. Phambi kokuba izikhombisi ezikhomba ezulwini zeenkolelo zobuKristu ziphakanyiswe kumhlaba weYurophu, isangqa samatye kunye neentsika kunye namachaphaza asetyenziswa ngumntu ukumbeka ngeentsikelelo zezulu kuye xa wayesemhlabeni, kunye nokumenza ukuba akwazi ukungena kwindawo yolonwabo yasezulwini emva ukufa. Ngendlela yakudala okanye engaphelelanga apho, okanye ngokulula okanye inkcubeko edluleleyo, ugqatso ngalunye lubonakalisile ukukholelwa kwimeko ezayo yezulu.
Uhlanga ngalunye luneentsomi zalo kunye neentsomi zabo ezibalisela ngendlela yabo yendawo okanye imeko yokungabinatyala, apho ugqatso luhleli ngolonwabo. Kule meko yasekuqaleni banikwa umntu obalaseleyo owayejonge kuye uloyiko okanye uloyiko okanye intlonipho kwaye abamjonga njengenkosi, ijaji okanye njengotata, ngentembeko yabantwana. Ezi ngxelo zithi imithetho yanikezelwa ngumdali okanye umntu ophakamileyo, ukuze kuthiwe ngokuphila kwezi zinto, ugqatso luqhubeke nokuphila kwimeko yolonwabo olulula, kodwa iziphumo ezibi ziya kubakho nakuphi na ukumka kubomi obumiselweyo. Imbali nganye ibalisa ngendlela yayo yokungathobeli kohlanga okanye ubuntu, kwaye ke iinkxwaleko, intlekele, nentlekele, iintlungu zabo neentlungu zabo zibangelwa kukungathobeli nokungathobeli kookhokho.
Intsomi kunye nembali kunye nesibhalo sithi uluntu lufanele ukuba luphila esonweni kunye nosizi, lubethwe sisifo kwaye lubandezeleke ngexhego eliya liphela ngokufa, ngenxa yesono samandulo sookhokho. Kodwa irekhodi ngalinye ngendlela yalo, kunye neempawu zabantu ezenziwe ngayo, uxela kwangaphambili ixesha apho ngokuthandwa ngumdali okanye ngokuchaswa kwezenzo eziphosakeleyo ezenziweyo, amadoda aya kubalekela iphupha eliyinyani lobomi bomhlaba aze angene yindawo apho kungabikho zintlungu, ukubandezeleka, izifo nokufa, zikho apho bonke bangenayo behlala khona bengonwabi kwaye benganyanisekanga. Esi sisithembiso sezulu.
Intsomi kunye nembali ixele kwaye isibhalo sichaze indlela umntu amele aphile ngayo kunye nento aza kuyenza ngaphambi kokuba afumane okanye ambonise ubuhle bezulu. Efanele ubomi kunye neempawu zohlanga lwakhe, umntu uxelelwa ukuba uyakufumana izulu ngenceba kaThixo okanye ayifumane ngezenzo zobukroti emfazweni, ukoyisa utshaba, ukoyisa abangenanto, ngobomi bokuzila, ukuhlala yedwa, ukholo ukuthandaza okanye ukohlwaya, ngezenzo zothando, ngokuphelisa ukubandezeleka kwabanye, ngokuzibetha kunye nobomi benkonzo, ngokuqonda nangokuhlula kunye nokulawula iminqweno yakhe engalunganga, utyekelo kunye notyekelo, ngokucinga okulungileyo, isenzo esifanelekileyo kunye Ulwazi, nokuba izulu lingaphezulu okanye ngaphezulu komhlaba okanye liya kuba semhlabeni kwixesha elizayo.
Iinkolelo zobuKristu ngokubhekisele kwimeko yangaphambili kunye nekamva lomntu zahluke kancinane kunakwezinye iinkolelo zamandulo. Ngokwimfundiso yobuKrestu umntu uzelwe kwaye uphila esonweni, kwaye kusithiwa isohlwayo sesono kukufa, kodwa angabalekela ekufeni kunye nezinye izohlwayo zesono ngokukholelwa kuNyana kaThixo njengoMsindisi wakhe.
Iingxelo kwiTestamente eNtsha malunga nezulu ziyinyani kwaye zintle. Iingxelo zezakwalizwi malunga nezulu lezakwalizwi sisininzi sezinto ezingekho ngqiqweni, ukuchasana kunye nokungaboni ngamehlo. Batshitshisa iingqondo kwaye basebenzise iimvakalelo. Isibhakabhaka semfundiso yenkolo yindawo ekhanyiswe zizibane eziqaqambileyo, kwaye ezibonelelwe kakhulu kwaye z ihonjiswe ngezinto ezixabisekileyo zomhlaba; Indawo apho iingoma zokudumisa ziculwa ngonaphakade kumakhonkco omculo; apho iitrato ziqukuqela ubisi kunye nobusi kwaye apho ukutya okuziindidi zonke kuyanda; apho umoya uzele livumba levumba elimnandi kunye neziqholo zebhalm; apho ulonwabo kunye nokonwaba kuphendula kuko konke ukuchukumisa kwaye apho amabanjwa okanye iingqondo zamadoda zicula kwaye zidanisa kwaye zithokozise kwaye zikhwankqisa kwihosannas yomthandazo kunye nendumiso, kuyo yonke indalo engapheliyo.
Ngubani ofuna izulu elinje? Nguwuphi umntu ocinga ukuba angamkela izulu elinzulu elinobunkunkqele, ukuba linokuphanziswa kuye? Umphefumlo womntu kufuneka ufane nesidenge, intlanzi yejelly okanye i-mummy, ukumelana nayo nayiphi na into enje. Akukho mntu ufuna izulu lezakwalizwi kule mihla kwaye akukho namnye ongaphantsi komfundi wezakwalizwi. Ufuna ukuhlala apha kulo mhlaba uqalekisiweyo kunokuya ezulwini enobuqaqawuli awayeyicwangcisile kwaye wayakha wayilungiselela isibhakabhaka esikude.
Yintoni izulu? Ngaba ayiyo okanye ngaba ikho? Ukuba ayenzi njalo, kutheni ke uchitha ixesha ekuzikhohliseni ngento enjalo engenamsebenzi? Ukuba ikhona kwaye kufanelekile ngelixa, kufanelekile ukuba umntu ayiqonde kwaye ayisebenzele.
Ingqondo iyalulangazelela ulonwabo kwaye ikhangele phambili kwindawo okanye kwindawo apho ulonwabo luya kufezekiswa. Le ndawo okanye le ndawo ichazwa kwigama izulu. Inyaniso yokuba zonke iintlobo zabantu ziye ngalo lonke ixesha icinga kwaye zikholelwa kuhlobo oluthile lwezulu, isibakala sokuba bonke baqhubeka nokucinga kwaye bejonge phambili ezulwini, bubungqina bokuba kukho into ethile esengqondweni eqhuba le ngcinga, kwaye ukuba le nto kufuneka ifane ngohlobo lwento ishukumisela yona, kwaye iya kuqhubeka ishukumisela kwaye isikhokele ingcinga ibheke phambili de ibe injongo elungileyo ifikelele kwaye ifezekisiwe.
Kukho amandla amakhulu kwingcinga. Ngokucinga kunye nokujonga phambili ezulwini emva kokuba umntu efile, umntu ugcina amandla aze akhe ngokwendlela efanelekileyo. La mandla kufuneka abenentetho. Ubomi obuqhelekileyo basemhlabeni abuniki thuba lokubonakaliswa. Iinjongo ezinjalo kunye neminqweno ifumana ukubonakaliswa kwabo emva kokufa ezulwini.
Ingqondo ngumntu wasemzini ovela kwindawo yolonwabo, ilizwe lengqondo, apho usizi, usukuzwano kunye nokugula kungaziwa. Ukufika elunxwemeni lwehlabathi elibonakalayo elinomtsalane, undwendwe luyahanjiswa, luyaphazama, luxakwe zizinto ezikhohlisayo, ubuqhetseba kunye nenkohliso yeefom kunye nemibala kunye neemvakalelo. Ngokulibala imeko yakhe eyonwabileyo kwaye efuna ulonwabo ngokusebenzisa imizwa kwizinto ezinoluvo, uzabalaza kwaye azabalaze kwaye emva koko lusizi lokufumana ngokusondela kwizinto, olo lonwabo alukho. Emva kokuhlala ngokuhlala kunye nokuxoxisana, ngeengxabano, impumelelo kunye nokudumala, emva kokuqaqamba kwintlungu kunye nokukhululwa ngovuyo olungathethekiyo, undwendwe luhamba kwihlabathi lokuphila kwaye libuyele kwimeko yakhe eyonwabileyo, ethatha amava.
Ingqondo iza kwakhona kwaye ihlale kwaye ihamba kwaye igqitha kwilizwe lehlabathi ukuya kulo, ilizwe leengqondo. Ingqondo iba ngumhambi otya ixesha kwaye ebehlala etyelela, kodwa engakhange avakalise ubunzulu okanye azisombulule iingxaki zobomi obuqhelekileyo. Umntu unamava amaninzi ngenzuzo encinci. Uza kwikhaya lakhe laphakade ukuze achithe usuku emhlabeni, aze emva koko aphumle ukuze aphumle, kodwa abuye kwakhona. Oku kuya kwenzeka ade azifumane ngokwakhe, umkhululi wakhe, oya kuzilawula amarhamncwa asendle, athi yena awenze into ekhohlakeleyo, amkhokele kwizinto ezilungileyo zentlango yehlabathi etyibilika kuyo. apho azaziyo khona, engathintelwa ziimvakalelo kwaye engenakuthanani namabhongo okanye izilingo kwaye engafumananga kwizenzo zesenzo. Ude afumane umkhululi wakhe kwaye ayazi indawo yakhe yokhuseleko umntu unokujonga phambili ezulwini, kodwa akayi kuyazi okanye angene ezulwini ngelixa kufuneka eze ngokungazi kwihlabathi elibonakalayo.
Ingqondo ayizifumani izinto ezibalulekileyo zezulu emhlabeni, kwaye ayinakuze ibe lixesha elifutshane ngokuhambelana nendawo eyijikelezileyo kunye neemvakalelo zayo kunye neemvakalelo kunye nokuziva okukhoyo. Kude kube yilapho ingqondo iba ngumazi nenkosi yazo zonke ezi zinto, ayinakulazi izulu emhlabeni. Ke ingqondo kufuneka ikhululwe kukufa kwinyama yenyama, ndingene kwimeko yolonwabo njengomvuzo wayo, ndiphilele iinjongo ezijonge kuyo, kwaye ikhululwe kwimbandezelo ezanyamezelayo, yaphuncuka. izilingo ekuzabalazeleni, kunye nokonwabela izenzo ezilungileyo ezenzileyo kunye nomanyano olufanelekileyo oluye lwalufuna.
Emva kokufa asingabo bonke abantu abangena ezulwini. Abo bantu banengcinga nomsebenzi ochithelwe kwizinto zobomi bokwenyama, abangaze bazithathele ingqalelo okanye bazixhalabise ngekamva elizayo emva kokusweleka, abangenazinjongo zimbi zokonwaba okanye umsebenzi, abangacingi okanye batyekele kubuThixo obungaphaya okanye ngaphakathi kubo, abo bantu abayi kuba nazulu emva kokufa. Ezinye zeengqondo ezikweli klasi, kodwa ezingezizo iintshaba zoluntu, zihlala zikwimeko ephakathi njengobuthongo obunzulu, de kube imizimba yenyama ilungisiwe kwaye ilungele bona; emva koko bangena ngokuzalwa kwezi kwaye emva koko baqhubeke nobomi kunye nomsebenzi njengoko befunwa bubomi babo bangaphambili.
Ukungena ezulwini, umntu kufuneka acinge kwaye enze oko kwenza izulu. Izulu alizange lenziwe emva kokufa. Izulu allenzelwa bubuvila bengqondo, ngokungenzi nto, ngokukhathala, ngokudinwa ngexesha, okanye ukuphupha ubuvila ngelixa liphaphile, kwaye ngaphandle kwenjongo. Izulu lenziwa ngokucinga ngobomi bakhe nangabanye bokomoya nangokokuziphatha kwaye ufunyanwa ngokusebenza ngokuzinikela ukuya kuthi ga apho. Umntu unokunandipha izulu kuphela awakha nalo ngokwakhe; izulu lomnye asiyiyo izulu lakhe.
Emva kokusweleka komzimba wayo wengqondo, ingqondo iqala inkqubo yokupheliswa apho iminqweno egwenxa kunye neminqweno yenyama, ukoyiswa, inkanuko kunye neminqweno iphinde itshiswe okanye itshiswe. Ezi zizinto ezisoloko zisenzeka kwaye ziqhatha kwaye zilahlekisa kwaye zilahlekisa kwaye zidanisa kwaye zibangele ukuba kube yintlungu kunye nokubandezeleka ngelixa kubomi bomzimba kwaye obuthintela ukwazi ulonwabo lokwenene. Ezi zinto kufuneka zibekwe ecaleni kwaye zahlukaniswe nazo ukuze ingqondo iphumle kwaye lonwabe, kwaye iphilele iinjongo ebezilangazelela, kodwa azange zikwazi ukufezekisa kubomi bomzimba.
Izulu liyimfuneko kwiingqondo ezininzi njengoko ukulala nokuphumla kungumzimba. Xa yonke iminqweno yenyama kunye neengcinga zikhutshiwe kwaye zigqityiwe ngengqondo, ke ingena ngaphakathi ezulwini eyayililungiselele ngokwayo.
Eli zulu emva kokuba lifile alinakubekwa kwindawo ethile okanye kwindawo ethile emhlabeni. Umhlaba owaziwa ngabantu ekufeni kobomi bomzimba awunakubonwa okanye uviwe ezulwini. Izulu alilinganiselwanga kubungakanani bomhlaba olulinganiswa ngawo.
Umntu ongena ezulwini alawulwa yimithetho elawula iintshukumo nezenzo zemizimba yasemhlabeni. Lowo usemazulwini akehambi, kwaye akabhabhi, kwaye akahambi ngenkuthalo yomzimba. Akathathi ukutya okumnandi, kwaye akaseli potato emnandi. Akayiva okanye avelise umculo okanye ingxolo kwizixhobo zomculo ezineentambo, zomthi okanye zensimbi. Akaboni amatye, imithi, amanzi, izindlu, iimpahla, njengoko zikhoyo emhlabeni, engaziboni nezinto ezibonakalayo nezinto ezikhoyo emhlabeni. Amasango pearl, izitrato zejaspi, ukutya okumnandi, iziphuzo, amafu, iitrone ezimhlophe, iihadi kunye neekherubhi zingabekwa emhlabeni, azifumaneki ezulwini. Emva kokuba umntu efile, umntu ngamnye wakhe owakhe amazulu kwaye enze njengearhente yakhe. Akukho nto ithengwayo kunye nokuthengisa kwintengiso okanye naziphi na iimveliso zomhlaba, njengoko ezi zingeyomfuneko. Izinto zentengiso aziqhutywa ezulwini. Onke amashishini kufuneka athathelwe ingqalelo apha emhlabeni. Amanqindi e-acrobatic kunye nezinto ezibonisa umdla, ukuba uyangqina, kufuneka zibonwe emhlabeni. Akukho basebenzi benziweyo abalungiselelwe ukuphathwa kwezulu, kwaye akukho mntu unokuba nomdla kwimiboniso enjalo. Akukho msebenzi wezopolitiko ezulwini, njengoko kungekho zikhundla. Akukho mahlelo okanye iinkolo ezulwini, njengoko mntu ngamnye eye washiya icawe yakhe emhlabeni. Kwaye ayiyi kufunyanwa imfashini kunye nabantu abakhethiweyo bezinto ezizodwa, kuba indawo ebanzi, iisilika kunye nezibane apho uluntu lunxibe aluvunyelwe ezulwini, kwaye nemithi yosapho ayinakutshalwa. I-veneer kunye neengubo kunye neebhandethi kunye nayo yonke into yokuhombisa imele ukuba isuswe ngaphambi kokuba umntu angene ezulwini, kuba yonke ezulwini injengoko injalo kwaye inokwaziwa ngokuba injalo, ngaphandle kwenkohliso kunye nokufihla ubuxoki.
Emva kokuba umzimba wenyama ubekelwe ecaleni, ingqondo eyayingenamzimba iqala ukuyilahla kwaye izikhulule kumakhonkco eminqweno yayo yenyama. Njengoko iyalibala kwaye ingazi nto ngazo, ngokuthe ngcembe iingqondo zivuselela ngaphakathi kwaye zingene kwihlabathi lazo lasezulwini. Izinto ezibalulekileyo ezulwini ziluvuyo kunye nokucinga. Akukho nto yamkelweyo eya kuthi ithintele okanye iphazamise ulonwabo. Akukho kungqubana okanye ukucaphuka kwalo naluphi na uhlobo olunokungena ezulwini. Indawo yolonwabo, umhlaba wezulu, awumkhulu kangako, uyamangalisa okanye uyamangalisa kangangokuba ubangela ukuba ingqondo izive ingabalulekanga okanye ingabikho ndawo. Kananjalo izulu alinantlonelo, liqhelekileyo, alinamdla okanye liyinyani kangangokuba ukuvumela ingqondo ukuzijonga njengongaphezulu kwaye ingafanelekanga kurhulumente. Izulu kwingqondo engena, konke okuya kukwazi ukufumana loo ngqondo (hayi iithamsanqa) ulona lonwabo lukhulu kunye nolona lupheleleyo.
Ukonwaba kwezulu kungokucinga. Ucingelwe ungumyili kunye nemfashini kunye nomakhi wezulu. Izinto zokucinga nokucwangcisa konke ukubekwa kwezulu. Ukucinga kuvunywa kubo bonke abanye abathathe inxaxheba ezulwini. Ukucinga kucacisa into eyenziweyo, kunye nendlela eyenziwe ngayo. Kodwa kuphela ziingcamango zolonwabo ezinokusetyenziselwa ukwakha izulu. Iimpawu zinokungena ezulwini zengqondo kuphela ukuya kuthi kwinqanaba lokuba zenziwe zifanelekile kulonwabo ngokucinga. Kodwa iimvakalelo ezisetyenzisiweyo zezodidi oluphuculweyo ngakumbi kuneemvakalelo zobomi bomhlaba kwaye zinokusetyenzwa kuphela xa zingangqubani ngandlela zonke kunye nengcinga yezulu. Umxholo okanye iimvakalelo ezichaphazelekayo zenyama azinanxalenye okanye indawo ezulwini. Ke luhlobo luni lweemvakalelo ezi? Ziyimvakalelo ezenziwe ngengqondo okwexeshana nangomcimbi, kwaye azihlali.
Nangona umhlaba ungabonwa okanye ungavakali njengasemhlabeni, ukanti umhlaba usenokuba khona kwaye ubonwa ngengqondo xa iingcinga zelo ngqondo zinawo, ukuqhubela phambili okumiselweyo, ziwuthathele ingqalelo umhlaba. Kodwa umhlaba osezulwini ke ngumhlaba ofanelekileyo kwaye awubonwa ngengqondo ekwimeko yawo yokwenyani kunye nobunzima obuwubeka kwimizimba yenyama. Ukuba ingcinga yomntu ibikhathazekile nokwenza indawo yokuhlala nobuhle beendawo ezithile zomhlaba, ngokuphucula imeko yendalo yomhlaba kwaye iguqulwe ukuze ibonelele yena kunye nabanye, okanye ngokuphuculwa komzimba, iimeko zokuziphatha nezengqondo nangayiphi na indlela, ke umhlaba okanye iindawo zomhlaba awazibandakanya nawo, uya kuthi, ezulwini lakhe, azalisekiswe kwelona gxibeleleyo ligqibeleleyo, ngengcinga yakhe, nangaphandle kwemiqobo nezithintelo awayenazo waye walwa kubomi bomzimba. Ingcinga ithatha indawo yentonga yakhe yokulinganisa kwaye umgama unyamalale ucinga. Ngokwengcinga yakhe esemhlabeni nangomhlaba, uya kuba njalo ke ukuyazi kwakhe ezulwini; kodwa ngaphandle kokusebenza ngokusebenza kwaye ngaphandle komzamo wokucinga, kuba ingcinga ethi izise ukuqondwa yenziwa emhlabeni kwaye iphila nje ezulwini. Ingcinga ezulwini lulonwabo kunye nesiphumo sokucinga okwenziwa emhlabeni.
Ingqondo ayichaphazeli umxholo wentloko ngaphandle kokuba umxholo wawunxulumene nokulunga kwawo ngelixa usemhlabeni kwaye wawuthathelwa ingqalelo ngaphandle komdla omkhulu kakhulu kwisiqu sakho. Umvelisi ocinga ukuba emhlabeni unento yokwenza nesithuthi okanye isixhobo esithile sokufumana into ngeenjongo zokuyenza into, ukuba unokungena ezulwini, ngekhe alibale angawazi ngokupheleleyo umsebenzi wakhe apha emhlabeni. Kwimeko yomvelisi ogama lakhe lilungele ukugqibezela isithuthi esinjalo okanye isixhobo ngeenjongo zokuphucula iimeko zoluntu okanye ukunceda abantu ebunzimeni, ngenjongo yobuntu, kwanaleyo yalowo ucinga ukuba uza kwenza kunye nokugqibezela ukwenziwa kwezinto ngenjongo yokubonisa isindululo esingaqondakaliyo - okoko ukucinga kwakhe ngaphandle komthengi omkhulu okanye isigqibo sokulungiselela ukwenza imali-umsebenzi ocingelwa ukuba uza kuba nenxaxheba kumyili wezulu kwaye uyakukufezekisa ngomlinganiso opheleleyo Zange ndikwazi ukubona emhlabeni.
Ukuhamba okanye ukuhamba kwengqondo kwilizwe layo lasezulwini akwenziwa ngokuhamba nzima okanye ukubhukuda okanye ukubhabha, kodwa ngocinga. Ukucinga yindlela yokudlula kwengqondo ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Le ngcinga inokukwenza oku ngamava obomi bomzimba. Umntu unokuhanjiswa ngengcinga ukuya kwezona ndawo zikude zomhlaba. Umzimba wakhe wokwenyama uhlala apho ukhoyo, kodwa ingcinga yakhe ihamba apho athanda khona kunye nokukhawuleza kwengcinga. Kulula kuye ukuba azithubeleze ngengcinga esuka eNew York ukuya eHong Kong, njengoko isuka eNew York iye e-Albany, kwaye akusekho xesha lifunekayo. Indoda xa ihleli kwisitulo sayo isenokungabikho kwindawo yokucinga iphinde ibuye kwiindawo ezikude apho ibikade ikho kwaye inokuhlala kwakhona izehlo ezibalulekileyo zexesha elidlulileyo. Ukuthunga kungabonakala buhlalu ebunzini lakhe njengoko esenza umsebenzi omkhulu wemisipha. Ubuso bakhe busenokuba bomdaka ngombala njengoko yena, ebuyele kwixesha elidlulileyo, ebenzela ingqumbo yobuqu, okanye unokujika ajonge ukuba nengqondo njengoko edlula kwengozi enkulu, kwaye ngalo lonke eli xesha uya kuba engazi ngomzimba wakhe wenyama kunye nemeko engqongileyo ngaphandle kokuba uphazamisekile kwaye ukhumbule, okanye ade abuyele emzimbeni wakhe esihlalweni.
Njengokuba indoda inokuthi yenze kwaye iphinde ilungiselele ekucingeni izinto eziye zafikelwa ngumzimba wenyama ngaphandle kokuba wazi ngomzimba wakhe wenyama, ingqondo, nayo, inakho ukusebenza kwaye iphinde iphile ubomi obulungileyo ezulwini ngokwezenzo nangeengcinga zayo ezilungileyo xa wayesemhlabeni. Kodwa iingcinga ziya kuthi ke zingabi nakushiyeka kuko konke okuthintela ingqondo ukuba zonwabe. Umzimba osetyenziswa yingqondo yokufumana amava obomi bomzimba ngumzimba wenyama; umzimba osetyenziswa yingqondo yokufumana ulonwabo ezulwini yimizimba yokucinga yalo. Umzimba wenyama ulungele ubomi kunye nesenzo kwihlabathi elibonakalayo. Lo mzimba wengcinga wenziwe ngengqondo ngexesha lobomi kwaye uthatha ubom emva kokuba uswelekile kwaye uqhubeka ungabi lide kunexesha lezulu. Kule ngcinga yomzimba ingqondo iphila ngelixa isezulwini. Umzimba wengcinga usetyenziswa yingqondo ukuhlala kwilizwe lazo lezulu kuba izulu lomhlaba likwisimo sengcinga, kwaye lenziwe ngengcinga, kwaye nomzimba wokucinga usebenza njengemvelo kwilizwe lazo lasezulwini njengoko wenzayo umzimba wenyama umhlaba. Umzimba wenyama udinga ukutya, ukuze ugcinwe kwilizwe lomzimba. Ingqondo ikwafuna nokutya ukuze kugcinwe umzimba wayo wezulu, kodwa ukutya akunakuba kokwasemzimbeni. Ukutya okusetyenzisiweyo kungokucinga kwaye ziingcamango ezazisonwabisa ngelixa ingqondo yayikumzimba ngelixa usemhlabeni. Ngelixa umntu ebefunda kwaye ecinga kwaye esenza umsebenzi wakhe usebenze xa wayesemhlabeni, wayenako ngokwenza njalo, walungisa ukutya kwakhe kwasezulwini. Umsebenzi wezulu kunye nokucinga kuphela kohlobo lokutya olunokusetyenziswa yingqondo kwilizwe lakhona lezulu.
Ingqondo inokuqonda intetho kunye nomculo ezulwini, kodwa kuphela ngengcinga. Ingoma yobomi iya kuhamba kunye nomculo wamanqanaba. Kodwa le ngoma iya kube iqanjwe ngumbono wayo nangokweengcinga zayo xa isesemhlabeni. Umculo uya kuvela kwizigaba zezulu zehlabathi zezinye iingqondo, njengoko zidibene.
Ingqondo ayichukumisi ezinye iingqondo okanye izinto ezisezulwini, njengoko izinto ezibonakalayo zinxibelelana neminye imizimba yasemhlabeni. Kwisibhakabhaka sayo umzimba wengqondo, ongumzimba wengcinga, uchukumisa eminye imizimba ngengcinga. Umntu owaziyo ukuchukumisa ngokudibana kuphela kwenyama enesinye isixhobo okanye ukuchukumisa kwenyama enenyama, akasayi kuluxabisa uvuyo olunokunikelwa kwingqondo ukusuka ekuchukumiseni kwengcinga kunye nengcinga. Ulonwabo luqapheleka, phantse, ngokuphathwa kwengcinga kunye nengcinga. Ulonwabo alunakuze lufezekiswe ngokudibana kwenyama nenyama. Izulu ayisiyondawo engenamntu okanye imeko apho ingqondo nganye ibekwe yodwa kwindawo ethile ezulwini. I-Hermits, ihlala yodwa kunye neefani zedatha. Iingcamango zabo bezikhathazeke ngokukodwa ngokuzicingela bodwa okanye iingxaki ezingaqondakaliyo, banokonwabela amazulu abo, kodwa kunqabile ukuba ingqondo ingabinakho konke okanye ezinye izinto zengqondo ezikunye nomhlaba wakhe wezulu.
Izulu elihlala kulo umntu emva kokuba efile likwimo yakhe yengqondo. Ngale nto wayejikelezwe kwaye wayehlala khona ngexesha lokuphila kwakhe komzimba. Umntu akaboni imeko yakhe yengqondo, kodwa abe eyazi emva kokuba efile, kwaye emva koko akangomhlaba wezulu, kodwa njengezulu. Kuya kufuneka kuqala adlule, akhule ngaphandle, kwimeko yakhe yengqondo, oko kukuthi, ahambe esihogweni, ngaphambi kokuba angene ezulwini. Ngexesha lobomi bomzimba, iingcinga ezakha izulu lakhe emva kokufa zihlala zikwimo yakhe yengqondo. Ziyi, ukuya kumkhamo omkhulu, azihlali ngaphandle. Izulu lakhe liqulunqwe luphuhliso, ukuhlala ngaphandle kunye nokuqonda ezi ngcinga zilungileyo; kodwa ngalo lonke ixesha, ukukhunjulwa, ukwimo yakhe. Kule meko umoya unikwe intsholongwane awakhe kuyo umzimba wakhe olandelayo.
Ingqondo nganye inabo kwaye ihlala kwakwayo isibhakabhaka, njengokuba ingqondo nganye iphila emzimbeni wayo nakwisimo sayo sehlabathi. Zonke iingqondo kumazulu abo ahlukeneyo zikumhlaba wezulu elikhulu, ngokufana nabantu ngaphakathi Ingqondo ayibekwanga ezulwini njengoko abantu benendawo kunye nendawo emhlabeni, kodwa ingqondo ikuloo meko ngokwemibono yayo kunye nomgangatho weengcinga zayo. Ingqondo inokuzivalela ngaphakathi kwakwelo izulu ngaphakathi kwezulu elikhulu kwaye ingadibani nezinye iingqondo ezifana nomgangatho okanye amandla, ngokufanayo nendoda xa izivalela emhlabeni xa izishiya ebantwini. Ingqondo nganye inokuthatha inxaxheba ezulwini enye ingqondo okanye nazo zonke ezinye iingqondo ukuya kwinqanaba lokuba iingcinga zabo ziyafana kwaye kwinqanaba lokuba iingcinga zabo zihambelane, ngokufanayo njengoko amadoda asemhlabeni weembono ezinobunye edityaniswa kunye kwaye onwabele ubudlelane bezengqondo. ngokusebenzisa ingcinga.
Umhlaba wezulu wakhiwe kwaye wenziwe ngeengcinga, kodwa ngeengcinga ezinjalo kuphela eziya kuba negalelo kulonwabo. Iingcamango ezinje: ubanjiwe, ebeya kundibulala, andithuke, andixokise, nokuba, ndinomona ngaye, ndiyamona, ndiyamcaphukela, akanakudlala nayiphi na indawo ezulwini. Ayifanelanga kucingelwa ukuba izulu yindawo enesidima okanye ilizwe kuba lenziwe ngezinto ezingenakuqiniseka nezingaqinisekanga njengeengcinga zomntu. Ulonwabo oluphambili lomntu emhlabeni, nokuba incinci, iza ngengcinga yakhe. Ookumkani behlabathi bomhlaba abalufumani ukonwaba ngokubanika igolide, kodwa kwiingcinga zokuba banayo, nangamandla abo alandelayo. Umntu obhinqileyo akalufumani ulwalamano oluhle naye kwizinto ezininzi ezixabisekileyo ezisetyenziselwa ukwakheka kwesambatho kunye nokunxiba eso sinxibo, kodwa ulonwabo luvela kwingcinga yokuba iyamhle kwaye ingcinga yokuba iyalela ukunconywa kwabanye. Uyolo lomculi alukho kwimveliso yomsebenzi wakhe. Yingcamango emi emva kwayo eyonwabisayo. Utitshala akakholisekanga yinto yokuba abafundi bekwazi ukukhumbula iifomula ezinzima. Ukoneliseka kwakhe kulele kwisigqibo sokuba bayakuqonda kwaye bayakusebenzisa oko bakukhumbulileyo. Ukonwaba okuncinci okufunyanwa ngumntu emhlabeni, ufumana ngengcinga yakhe kuphela, kwaye engaphumi nakweyiphi na into ebonakalayo okanye impumelelo. Emhlabeni iingcinga zibonakala zingabambeki kwaye zingenangqondo, kwaye iimpahla zibonakala ziyinyani. Ezulwini izinto ezinengqiqo ziphelile, kodwa iingcinga ziyinyani. Ngaphandle kokungabikho kweefom zezengcinga ezivakalayo kunye nobukho bokwenyani kwezihloko zezengcinga, ingqondo iyonwabile ngaphandle kokuqonda ingqondo yomntu oqhelekileyo ngemvakalelo yakhe ngelixa esemhlabeni.
Bonke abo bangene kwiingcinga zethu ngelixa besesemhlabeni, okanye abo iingcinga zethu bezijolise ekufezekisweni kokulungileyo, baya kuthi engqondweni babekhona kwaye bancede ukwenza izulu lethu. Ke izihlobo zomntu azikwazi ukuvalelwa ezulwini. Ubudlelwane bunokuthi buqhubeke yengqondo kwilizwe lawo lasezulwini, kodwa kuphela ukuba ubudlelwane bukokwimo elungileyo kwaye bungabi bume ngokwasemzimbeni nasenyameni. Ngokwenyama ayinasabelo ezulwini. Akukho ngcinga ngesondo okanye isenzo sesondo ezulwini. Ezinye iingqondo ngelixa zinemizimba yenyama, zisoloko zidibanisa ingcinga "yendoda" okanye "yomfazi" kunye nezenzo ezibonakalayo, kwaye kunokuba nzima kubo ukucinga ngendoda nomfazi ngaphandle kwengcinga yolwalamano lwabo lomzimba. Akunzima ukuba abanye bacinge ngendoda okanye inkosikazi, njengamaqabane abandakanyeka kwimisebenzi eya kwinto eqhelekileyo okanye njengesihloko sothando lokungazingci nolungelolwesini. Xa ingqondo ethambekele kuyo iye yahlukana nomzimba wayo wenyama kwaye sele ingene kumhlaba wayo wezulu, nayo, ayiyi kuba naloo nto yokwabelana ngesondo kuba iya kuba yahlukane nomzimba wayo wenyama kunye neminqweno yayo yovuyo kwaye iya kube ihlanjululwe kubuthathaka bayo Iminqweno.
Umama obonakala ngathi uhlukaniswe kukufa emntwaneni wakhe unokuphinda adibane naye ezulwini, kodwa njengoko izulu lahlukile emhlabeni, kanjalo umama nomntwana bayohluka ezulwini kwinto ababeyiyo emhlabeni. Umama othathe umntwana wakhe ngokuzithandela kuphela, kwaye ethatha umntwana njengepropathi yakhe, akamnqweneli umntwana onjalo kwaye angabi nayo naye ezulwini, ngenxa yokuba ingcinga enjalo yokuzingca inento yokwenyama isemzini kwaye ngaphandle ezulwini. Umama odibana nomntwana wakhe ezulwini ubenesimo sengqondo esingafaniyo neso sibhekiswe kuye, kunokuba umama ozingcayo azale umntwana wakhe ongumzimba, ngelixa ekwinyama yokwenyama. Iingcamango ezilawulayo zoomama abangazingcayo ziluthando, uncedo kunye nokukhuselwa. Iingcinga ezinjalo azitshatyalalwanga okanye zithintele ekufeni, kwaye umama owayeneengcinga ezinjalo ngomntwana wakhe xa esemhlabeni uya kuqhubeka enazo ezulwini.
Akukho zingqondo zomntu zilinganiselwe okanye ziqaqanjelwe emzimbeni wayo kwaye yonke ingqondo yomntu enomzimba inotata wayo ezulwini. Loo ngqondo ishiye ubomi basemhlabeni bangene ezulwini yayo, kwaye iingcinga zayo ezibalaseleyo zijolise kubo okanye zichaphazela abo bayaziyo emhlabeni, zinokuchaphazela iingqondo zabo basemhlabeni ukuba iingqondo zasemhlabeni zifikelela phezulu ngokwaneleyo ekucingeni.
Ingcinga yomntwana aza kuthathwa ngumama wakhe ezulwini ayingobume bayo kunye nobukhulu bayo. Kubomi bomzimba wayeyazi umntwana wakhe njengosana, njengomntwana esikolweni, kwaye kamva mhlawumbi njengotata okanye umama. Kuwo wonke umsebenzi wobomi bomzimba wakhe ingcinga ezifanelekileyo zomntwana wakhe azitshintshanga. Ezulwini, ingcinga kamama ngomntwana wakhe ayiquki umzimba wakhe wenyama. Ingcinga yakhe yeyokulunga kuphela.
Umntu ngamnye uya kudibana nabahlobo bakhe ezulwini ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba abazi abo bahlobo emhlabeni. Emhlabeni umhlobo wakhe unokuba nenaliti okanye iliso lenyanga, iqhosha okanye impumlo yebhotile, umlomo onje nge-cherry okanye isikhafu, isitya okanye ibhokisi yebhokisi, intloko enomqala weperesi okanye intloko enjengembumbulu, ubuso obunjengobu umnqwazi okanye isikwashi. Ubume bakhe busenokubakho kwabanye abanjengo-Apollo okanye umtshutshisi. Ezi zihlala zizinto ezifihlakeleyo kunye nemaski enxitywa ngabahlobo bakhe emhlabeni. Kodwa ezi mfihlakalo ziya kuhlatywa ukuba uyayazi umhlobo wakhe. Ukuba wabona umhlobo wakhe ngokusebenzisa imfihlakalo esemhlabeni uyomazi kwihlabathi elisezulwini ngaphandle kwezo zimfihlo.
Akukho ngqiqweni ukulindela ukuba siza kubona okanye sibe nezinto ezulwini njengoko sinezinto emhlabeni, okanye sivakalelwe kukuba izulu alizukunqwenelekayo ngaphandle kokuba sikwazi ukuba nazo. Umntu akafane abone izinto njengoko zinjalo, kodwa njengoko ecinga ukuba zinjalo. Akakuqondi ukuxabiseka kwezinto zakhe kuye. Izinto ezinjengezinto ngokwazo zezomhlaba kwaye zibonakaliswa ngokwamalungu omzimba wakhe okubonakalayo. Iingcamango zezi zinto kuphela ezinokuthi zithathwe ziye ezulwini kwaye ziingcinga ezinjalo kuphela ezinokungena ezulwini njengoko ziya kuba negalelo kulonwabo lwengqondo. Ke loo nto ke loo nto ibicinga ukuba ngumzimba ophezu komhlaba, akuyi kuphulukana nelahleko ngokunikela ngento engenakuba negalelo kulonwabo lwayo. Abo sibathandayo emhlabeni, kwaye bathande abo kubalulekile ukuze sonwabe, abayi kubandezeleka ngenxa yokuba iziphoso kunye neendlela zabo ezimbi azithathelwa nathi ngecebo lokuya ezulwini. Siya kubaxabisa ngokwenyani xa sinokubacinga ngaphandle kweempazamo zabo kwaye sicinga ngabo njengezimvo. Iimpazamo zabahlobo bethu zingqubana neempazamo zethu emhlabeni, kwaye ulonwabo lobuhlobo luyonakaliswa kwaye luye. Kodwa ubudlelwane obungenasiphako bugqalwa ngcono kwilizwe lasezulwini, kwaye sibazi ngokwenyani njengoko banjalo kunokuba bevela kunye nenkunkuma yomhlaba.
Akunakwenzeka ukuba ingqondo ezulwini inxibelelane nomntu emhlabeni, okanye ukuba emhlabeni unxibelelane nomnye ezulwini. Kodwa olo nxibelelwano alusaqhutywa nangayiphi na imveliso yokusebenzisa ubugqi, okanye ukuba luvela kwimithombo yemimoya okanye kwinto abathetha ngayo “njengehlabathi lemimoya” okanye “ilizwe lasehlotyeni.” Iingqondo ezisezulwini ayisiyiyo "imimoya" abathetha ngayo imimoya. Umhlaba wezulu wengqondo ayisiyiyo imimoya yehlabathi okanye ilizwe lasehlotyeni lemimoya. Ingqondo esezulwini yayo ayingeni kwaye ayithethi ngommandla wehlobo, okanye nengqondo esezulwini ayizibonakalisi nangayiphi na indlela eyinyani eya kwelemimoya okanye kubahlobo bayo abasemhlabeni. Ukuba ingqondo ezulwini yangena kwilizwe lasehlotyeni okanye yabonakala kukusebenzelana nemimoya okanye yazibonakalisa ngokwasemzimbeni kwaye yaxhawulana izandla kwaye yathetha nabahlobo bayo ngomzimba wenyama, loo ngqondo imele ukuba iyawazi umhlaba, kunye nenyama kunye nentlungu, ukubandezeleka okanye ukungafezeki kwabo wayethetha nabo, kwaye umahluko woku ungaphazamisa kwaye uphazamise ukonwaba kwayo kwaye izulu liyakuphela kuloo ngqondo. Ngelixa ingqondo isezulwini ulonwabo lwayo aluyi kuphazamiseka; ayiyi kwazi nakuphi na ububi okanye iziphoso okanye ukubandezeleka kwabo basemhlabeni, kwaye ayiyi kulishiya izulu lide liphele ixesha layo ezulwini.
Ingqondo ezulwini inokunxibelelana nomntu emhlabeni ngokucinga nokucinga kuphela kwaye loo ngcinga kunye nonxibelelwano ziya kuhlala ziyinto ennoblement kwaye ilungile, kodwa ungaze ucebise umntu osemhlabeni ngendlela yokufumana imali, okanye ukwanelisa umnqweno wakhe okanye ukunika intuthuzelo nje yobuhlobo. Xa ingqondo ezulwini inxibelelana nomntu emhlabeni, ihlala iqhelekile ngenxa yokucinga ongenguye umntu okubonisa isenzo esithile esihle. Kunokwenzeka, nangona kunjalo, ukuba le ngcebiso inokuthi ihambisane nengcinga yomhlobo osezulwini, ukuba oko kucetyiswayo kudityaniswa nomlingiswa okanye kunye nomsebenzi wakhe ntoni emhlabeni. Xa ingcinga yalowo usemazulwini ibanjiwe yingqondo esemhlabeni, loo ngcinga ayizukuziphakamisa ngokwayo nayiphi na imeko. Unxibelelwano luya kubakho kwinto eyedwa. Ngexesha lokunqwenela nangaphantsi kweemeko ezifanelekileyo, umntu osemhlabeni unokudlulisela ingcinga yakhe ezulwini. Kodwa loo ngcinga ayinakuba namdaka emhlabeni kwaye kufuneka ihambelane nezinto ezifanelekileyo kwaye inxulumene nolonwabo lwengqondo ezulwini, kwaye ayimi kubudlelwane nobuntu bomntu oswelekileyo. Xa unxibelelwano phakathi kwengqondo ezulwini kunye nengqondo yasemhlabeni luqhutywa, ingqondo ezulwini ayiyi kucinga enye into esemhlabeni, nendoda esemhlabeni ayiyi kucinga enye ezulwini. Unxibelelwano lunokubakho kuphela xa iingqondo zidibene kunye, xa indawo, isikhundla, izinto, zingachaphazeli ingcinga kwaye xa ingcinga ibakho ngengqondo. Umntu oqhelekileyo akhulelwe. Ukuba lomthendeleko ubanjiwe, ixesha kunye nendawo aziveli. Xa olo manyano lubanjelwe ingqondo ezulwini ayize emhlabeni, kwaye umntu akanyukeli ezulwini. Ubudlelane obunjalo beengcinga buhamba ngengqondo ephezulu yalowo esemhlabeni.
Ngenxa yomehluko kwiinjongo kunye nomgangatho okanye amandla eengcinga kunye nezilangazelelo zabantu, izulu alifani kubo bonke abaya apho. Umntu ngamnye uyangena kwaye ayiqonde kwaye ayixabise njengokuzaliseka kwento awayeyinqwenelela ulonwabo. Umahluko kwiingcamango kunye neenjongo zabantu unike imbonakalo yokubala kunye nomgangatho wamazulu ahlukeneyo awonwabisayo umntu emva kokuba efile.
Kukho amazulu amaninzi njengoko kukho iingqondo. Ukanti zonke zikwindawo enye yehlabathi. Umntu ngamnye uhlala ezulwini yakhe kulonwabo ngaphandle kwako nakuphi na ukuphazamisa ulonwabo lwabanye. Olu lonwabo lunokuthi, ukuba lulinganiselwe, ngexesha nangemeko yamava omhlaba, lubonakale ngathi kunaphakade kanaphakade. Ngokwenyani yomhlaba inokuba mfutshane kakhulu. Kwalinye ezulwini ixesha iya kuba yinto engapheliyo, ongumjikelezo wamava okanye wengcinga. Kodwa ixesha liyaphela, nangona isiphelo singavakali ngathi ezulwini kuya kuba sisiphelo solonwabo lwayo. Ukuqala kwezulu layo kwakungabonakala ngathi ngequbuliso okanye kungalindelekanga. Isiphelo kunye nokuqala ezulwini kuqukulela omnye komnye, kuthetha ukugqitywa okanye ukuzaliseka kwaye kungazisoli okanye kumangalise njengoko la mazwi eqondwa emhlabeni.
Ixesha lezulu njengoko laligqitywe ngeengcinga ezifanelekileyo kunye nokusebenza ngaphambi kokuba ukufa kungabikho lide okanye lifutshane, kodwa liphelele kwaye liphela xa ingqondo iphumle ekusebenzeni kwayo kwaye iphelise kwaye yazalisa iingcinga zayo ezilungileyo obungazange izifezekise emhlabeni, kwaye oku kokunqiniswa komelezwa kwaye kuhlaziywe ngokuba kukhululwe kuyo kwaye ulibale amaxhala kunye namaxhala kunye nokubandezeleka okhe wakufumana emhlabeni. Kodwa kumhlaba wezulu ingqondo ayizufumani naluphi na ulwazi olungaphezulu kolo lwalunayo emhlabeni. Umhlaba ngumhlaba wedabi lomzabalazo wabo kunye nesikolo esifumana kuso ulwazi, kwaye emhlabeni kufuneka ingqondo ibuyele ukugqiba uqeqesho kunye nemfundo.
Ukuhlelwa kwembali kaJanuwari kuya kuba ngezulu lomhlaba.